Wararka Maanta: Khamiis, Mar 21, 2013-Madaxweynaha Soomaaliya oo Maanta kormeer ku tagay Dekedda Caalamiga ah ee Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
Kormeerkan ayuu madaxweynuhu ugu kuur-galayey sida ay howlaha kala duwan ee dekeddu u socdaan, iyadoo la ogyahay in dekeddu ay tahay isha ugu weyn ee ay dowladdu ka hesho dhaqaalaha ay ku shaqeynayso inta ugu badan.
Madaxweynaha warbixinno ku saabsan sida ay u socdaan howl-maalmeedka shaqo ee dekedda ka dhageystay maamulka dekedda, iyagoo madaxweynaha u sheegay in howshu ay u socoto si caadi ah, isla markaana ay sii kordhayaan maraakiibta iyo doonyaha kusoo xirana dekedda.
Ugu dambeyn, madaxweyne Xasan wuxuu sheegay in howlaha dekeddu ay u socdaan si wanaagsan, isagoo ku bogaadiyay maamulka guud ee dekedda sida ay howsha dekedda u wadaan.
Waa markii ugu horreysay oo madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh uu booqasho ku tago dekedda Muqdisho tan iyo markii xilka madaxweynimo loo doortay muddo hadda laga joogo lix bilood.
3/21/2013 2:53 AM EST
Khamiis, Maarso 21, 2013 (HOL) — Ururka Midowga Yurub ayaa lacag dhan 43-milyan oo doollar ugu deeqay ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ee ka howgala Soomaaliya, waxaana gargaarkan lagu dhawaaqay Talaadadii lasoo dhaafay ee bishan Maarso ay ahayd 19-ka.